Etu m siri wuo Nde Dollar B2B Business na LinkedIn Video | Martech Zone
Vidio ejiriwo ike nweta ebe ya dị ka otu n'ime ngwa ahịa ahịa kachasị mkpa, yana 85% nke ulo oru tinye video iji nweta ihe mgbaru ọsọ ha. Ọ bụrụ na anyị lelee azụmaahịa B2B, 87% nke ndị na-ere vidiyo akọwala LinkedIn dị ka ọwa dị irè iji melite ogo ntụgharị.
Ọ bụrụ na ndị ọchụnta ego B2B anaghị eji ohere a eme ihe, ha na-efu efu. Site na iwulite atụmatụ ntanye nkeonwe na vidiyo LinkedIn, enwere m ike ịmalite azụmaahịa m ihe karịrị otu nde dollar na enweghị ego.
Creatmepụta vidiyo dị mma maka LinkedIn gafere ụkpụrụ ahịa video ndụmọdụ. Ekwesiri imeputa vidiyo LinkedIn ma dozie ya nke oma maka ikpo okwu iji rute ndi ziri ezi ma nwee ezigbo mmetuta.
Nke a bụ ihe m mụtara (na ihe m chọrọ ka m mara) gbasara iji vidiyo LinkedIn wuo ụlọ ọrụ B2B.
Nsonaazụ Na-akwọ ụgbọala
M mere mbupute egwuregwu LinkedIn m ihe dị ka afọ abụọ gara aga. M na ike na-eke videos maka ụlọ ọrụ posts, ma onye mbọn bụ kpam kpam ọhụrụ m. Echeburu m echiche ịmepụta vidiyo LinkedIn chọrọ iguzo n'ụzọ zuru oke n'ihu mbadamba ma na-apụ apụ (ihe ederede doro anya) ihe ọmụma ahịa ahịa. M gbanwere atụmatụ m wee malite ịmepụta vidiyo ndị nkịtị na-ekwu banyere akụkụ nke ụlọ ọrụ m maara ma hụ n'anya.
Kama ilekwasị anya n'ire azụmahịa m, m lekwasịrị anya n'iweta ezigbo ọrụ uru nye ndị na-ege m ntị. Anọgidere m ịmepụta vidiyo ndị ọzọ, na-eme onwe m ka m bụrụ isiokwu gbasara ahịa, azụmaahịa, njikwa na ịzụ ahịa. Site na mgbasa ozi na mmekọrịta oge niile, emeere m ka ndị na-ege m ntị dị ukwuu n'ọnwa ole na ole sochirinụ: ọ ruru ndị na-eso ụzọ 70,000 ugbu a!
Ebumnuche vidiyo m (na njikere m inwe obere nke onwe) kwụrụ ụgwọ n'ụdị ọtụtụ ụzọ ọhụụ. Site n’itinye onwe m ebe ahụ ma na-ekwu maka ndụ m, ndị mmadụ ga-amata m, rute ma ọ bụrụ na ha chere na ha tozuru oke iso anyị rụọ ọrụ, usoro ịre ahịa na - eme ngwa ngwa. Site na mgbe olile anya LinkedIn a gara ileta websaịtị nke ụlọ ọrụ m ma ọ bụ rue m aka, ha adịla ezigbo ọkụ. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ m abanyela ihe karịrị otu nde dollar na nkwekọrịta sitere na ndu sitere na LinkedIn.
Ọ bụ ezie na m nwere enyemaka site na otu egwuregwu dị egwu nke na-azụlite ndị ahụ na-eduga, ọgbọ ndu bụ nnukwu nzọụkwụ mbụ-ọ na-achọkwa usoro vidiyo LinkedIn siri ike.
Gwa Akụkọ Anya
Vidio LinkedIn bụ ụzọ dị mma iji gwa akụkọ na-akpali akpali, na-ahụ anya gbasara akara aka gị na azụmaahịa gị. Ọ bụ ezie na usoro abụọ ahụ dị oke mma, ị na-ekwukarị ọtụtụ ihe banyere akara gị na vidiyo karịa ka ị nwere ike ịde blọgụ.
Uru nke vidiyo dị n'ihe ị nwere ike iji gosipụta / ihu igwe. Vidio na-eme ka ndị mmadụ jikọọ gị na ọbụna ịmara gị n'ihi na ha nwere ike ịchịkọta ozi site na ahụ gị na otu esi ekwu okwu. Ọtụtụ ndị agwala m na ọ dị ha ka ha amatala m site na ikiri vidio ndị m na-ekerịta na LinkedIn.
Enwere ike ịnata otu ozi dị iche mgbe ị nụrụ ụda olu ya na mmetụta ya. Mgbasa mgbasa ozi bụ ebe etiti ederede snappy, mana vidiyo na-adị ezigbo mma. Vidio na-emekwa ka ihe ngosi "pụta ìhè" nke mgbasa ozi mmekọrịta aghọwo. Have ga-enwerịrị obere rawer, obere ihe ị ga-eji kerịta vidio-ihe mmụta m na-amụta na afọ gara aga a mgbe m na ụmụ vidiyo atọ na-ese vidio site na ụlọ.
Tizụlite Ezigbo Ndị Na-ege Gị Ntị
Otu omume kachasị mma anyị na-etinye na ọwa ahịa ndị ọzọ na-etinye ebe a, kwa; ya bụ, na ị ga-enwe usoro gbasara ndị na-ege gị ntị, ị ga-enyekwa ndị mmadụ ihe kpatara ha ga-eji lekọta.
Dika anyi choro iche na igba otutu neti ga eweputa otutu ndu, anyi mara na nke a abughi eziokwu. Ikwesiri ibu n'uche banyere ndi na ege gi nti mgbe imeputa vidiyo LinkedIn. Nye na-agwa? Ezie na ị kwesịrị ị na-eduzi ederede ederede na otu onye, ​​inwe ndị na-ege ntị kpọmkwem ndị ị na-agwa okwu mgbe ị na-ese ihe ga-enyere gị aka ịmepụta ọdịnaya ndị ọzọ.
Ozugbo ikpebiere onye ị na-agwa okwu, ịchọrọ ozi ga-ada ụda. Know maara ihe hoo haa agaghị ada ụda? Nkọwa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ikwesiri inye ndi mmadu a ihe mere ilekọta gbasara ụlọ ọrụ gị tupu ị kwuo maka ya. Gbado anya na ịmepụta ọdịnaya mmụta bụ nke na-ekwu obere banyere ụlọ ọrụ gị.
Tupu ịmalite eserese, jụọ onwe gị, sị:
Kedu ihe ndị na-ege m ntị na-eche?
Kedu ihe ndị na-ege m ntị na-echegbu onwe ha?
Kedu ihe ndị na-ege m ntị chọrọ ịmụ banyere LinkedIn?
Cheta: ịzụlite ndị na-ege ntị anaghị akwụsị mgbe ị kụrụ 'Post.' Ikwesiri iwulite ndị na-ege gị ntị na njedebe azụ site na mmekọrịta (na inwe ezigbo mmasị na) ahịa ịchọrọ.
Iji jide n'aka na ndị ị na-ege ntị ị depụtara na-ahụ vidiyo gị, ọ na-enyere aka ibu ụzọ jikọọ. Mụ na ndị otu m na-eme nke a site na imepụta ndepụta nke atụmanya na ụlọ ọrụ ọ bụla ma na-akpọ ha ka ha sonye na netwọkụ anyị ka ha wee hụ ọdịnaya anyị na ndepụta ha. Ha na-na-echetara mgbe nile nke anyị ika na anyị bara uru na-enweghị anyị nwere na-akarị ike na-ere.
Mepụta Usoro Njikọ LinkedIn gị
Njikere ịmalite ịmepụta vidiyo LinkedIn gị iji wuo njirimara nke gị na nke ụlọ ọrụ gị? Ọ dịghị ọsụsọ na ya — ọ dịịrị gị mfe malitere karịa ka ị chere.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ m mụtara banyere ịmepụta vidiyo LinkedIn dị irè n'oge afọ 2 gara aga-gụnyere ọnwa 10 nke ịmepụta vidiyo n'oge ọrịa na-efe efe:
Egbula ya. Naanị gbanye igwefoto ma gbaa. Anaghịdị m ekiri vidio nke m n’ihi na m ga-ekewapụ onwe m iche.
Ekekọrịta posts n'ụtụtụ. Ga-ahụ ọtụtụ aka na ụtụtụ karịa nke mgbede.
Tinye ndepụta okwu. Ndị mmadụ nwere ike na-ekiri na ekwentị ha ma ọ bụ na ndị ọzọ, ha ga-ahọrọ ịgụ karịa ige ntị. Ọ bụkwa ihe kacha mma omume.
Tinye isi okwu. Mgbe ị na-agbakwunye ndepụta okwu, tinye isiokwu na-adọrọ mmasị na vidiyo gị
Nweta nkeonwe. Ihe ndị m mere nke ọma bụ maka ọdịda, na-atụgharị uche na ọganihu na njikwa ọnọdụ siri ike.
Buru onye mbu. M na-anwale na ikenye video usoro ma na-enwe ihe ọhụrụ na-ekwu (na dị iche iche na utu aha na thumbnails) bụ ihe na-ekere òkè.
Mgbakwunye na oyiri. Ndị mmadụ nwere ike ghara ịlele vidiyo gị zuru oke, nke ahụ dịkwa mma! Nye ha ihe mere ị ga-eji nọrọ na post gị ma tinye aka site na ịgbakwunye nnomi dị egwu.
Iji bulie akara B2B gị wee nọọ asọmpi, ịkwesịrị iji vidiyo LinkedIn. Ya mere, mechie anya gị ma maba n’ime! Ozugbo imalite ikenye, ị gaghị ekwenye na ị bulite ọsọ ọsọ.
Soro Jackie Hamis na LinkedIn
Tags: b2bb2b vidiyob2b video atụmatụjackie HamisLinkedInnjikọ na-eso ụzọLinkin ahịanjikọ videouruahịa vidiyoịkọ akụkọ